काठमाडौं साउन,९। आइसीसी यू-१९ विश्वकपको एसियाली छनौट अन्तर्गत नेपाली युवा टोलीले मलेसियालाई ५ विकेटले हराएको छ । सिंगापुरमा केहिबेर अघि सम्पन्न खेलमा मलेसियाले दिएको ९० रनको लक्ष्य नेपालले ५ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो । नेपालका लागि राहित कुमार पौडेलले सर्बाधिक अविजित ३४ रन बनाए । ओपनर सन्दिप सुनार १५ र अनिल शाह १२ रनमा आउट भए भने तेस्रो ...
काठमाडौं साउन,८ । पछिल्ला खबरहरुलाई मान्ने हो भने फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन नेयमारका लागि १९६ मिलियन पाउण्ड तिर्न तयार भएको छ । यो २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हो । एउटा खेलाडीका लागि एक सय र ९६ मिलियन पाउण्ड ? यो रकम म्यानचेष्टर युनाइडेलले पल पोग्बालाई भित्र्याउँदा खर्चिएको विश्वको कीर्तिमानी मूल्य ८९ मिलियन पाउण्डको दोब्बर हो । रियल मड...
फुटबल खेलाडीहरुलाई युएईमा सम्मान
युएई साउन, ७– नेपाली समाज युएईले फुटबल खेलाडीहरुलाई सम्मान गरेको छ । एएफसी यू–२३ च्याम्पियनसीपको छनोट चरणको खेलमा सहभागी हुन आएका नेपाली खेलाडी एवं प्रशिक्षकलाई गत अलऐनमा सम्मान गरेको हो । सम्मान कार्यक्रममा युएईका सफल ब्यावसायी एवं हामी नेपाली एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. दिनेश आचार्यले प्रति खेलाडी दश हजार प्रदान गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल...
विश्वकप छनौट : अफगानिस्तानसँगको हार भुलाउँदै सिङ्गापुरमाथि नेपालको २२ रनको जीत
साउन ६ २०७४ .
काठमाडौँ साउन ६– सिङ्गापुरमा भइरहेको आईसीसी एसिया यू–१९ विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आजको खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई २२ रनले पराजित गरेको छ । जितका लागि १ सय ६९ रनको लक्ष्य पाएको सिंगापुर ४६.५ ओभरमा मात्र १४६ रनमा अलआउट हुन पुग्यो । नेपालले प्रस्तुत गरेको मध्यम योगफल पछ्याउने क्रममा सिंगापुरले शुरुवात भने राम्रो गरेको थियो ।...
नेपालद्वारा सिंगापुरसामू १६९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
काठमाडौं साउन,६ । आईसीसी यू-१९ विश्पकप छनोटमा नेपालले सिंगापुरसामू १६९ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । सिंगापुरले केहीबेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको नेपालले ४६.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १६८ रन बनायो । नेपालको सुरुवात खासै राम्रो हुन सकेन । २० रन जोड्दा पहिलो विकेटका रुपमा अनिल साहलाई व्यक्तिगत ७ गुमाएको नेपालले ...
यू-१९ विश्वकप छनोटः अफगानसँग नेपाल पराजित
साउन ५ २०७४ .
काठमाडौं साउन,५ । आइसीसी यू-१९ विश्वकपको एशियाली छनोटमा नेपालले अफगानिस्तानसँग लज्जास्पद हार व्यहोरेको छ । १९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल २६ ओभरमा मात्र ४९ रनमा अलआउट भयो र अफगानसँग १४१ रनले पराजित भएको छ । सुरुवाति दुई खेल जितेको नेपाली किशोर टोलीको वास्तविक परीक्षा अफगानी टिमसँग हुने मानिएको थियो । जसमा बलिङतर्फ ठीकै प्रदर्शन गरेपनि ब्याटि...
यू–२३ च्याम्पियनसिप फुटबल : नेपाल लेबनानसँग पराजित
काठमाडौँ साउन ५ - एएफसी तेइस वर्षमुनि (यू २३) च्याम्पियनसिप फुटबलको छनोट चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल लेबनानसँग पराजित भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई को अल अइनस्थित ताहानोनविन मोहम्मद स्टेडियममा बुधबार राति १ बजे सम्पन्न खेलमा नेपाल लेबनानसँग २–० गोलअन्तरले पराजित भएको हो । नेपालले खेलको पहिलो हाफ र दोस्रो हाफमा एक÷एक गोल खायो । खेलको पहिल...
आइसीसी एसिया यू–१९ क्रिकेटः नेपाल १९१ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै, अफगानिस्तान १९० मै अलआउट
पदाङ । सिंगापुरको पदाङमा भइरहेको आइसीसी एसिया यू–१९ विश्वकप छनोट क्रिकेटको तेस्रो खेल विजयका लागि नेपालले १९१ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै छ । पेदाङ रंगशालामा भइरहेको खेलमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ गरे पनि सुरुवातमा विकेट लिन नसके पनि पछिल्ला विकेट भने निकै सजिलै लिएको थियो । कसिलो बलिङ गर्न सकेको छैन । अफगानिस्तानले ७५ रन जोड्दा पहिलो विकेट गुमाए प...
सान्त्वना जितका लागि आज नेपालले लेवनानसँग खेल्ने
साउन ४ २०७४ .
काठमाडौं साउन, ४। सुरुवाती दुई खेलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेको नेपालले एएफसी यू-२३ च्याम्पियनसिप छनौटको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज लेवनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । युएईको अल अइनस्थित तनउन विन मोहम्मद रंगशालामा आज साँझ खेल हुनेछ । च्याम्पियनसिप छनौटको समूह डीमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा युएईसँग ५-० र दोस्रो खेलमा उज्वेकिस्तानसँग २-० ...
उत्कृष्ट बलिङसँगै नेपालको दोस्रो जित, व्याटिङमा समस्या कायमै
काठमाडौं साउन, ३ । उत्कृष्ट बलिङसँगै नेपालले यू-१९ विश्वकप छनोट क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । तर, व्याटिङमा देखिएको समस्या भने अझै कायमै छ । सिंगापुर क्रिकेट क्लब, पादाङमा टस जितेको फिल्डिङ रोजेको नेपालले मलेसियालाई ५८ रनमा अलआउट गर्‍यो । र, यो लक्ष्य भेट्टाउन पनि नेपालले ९.५ ओभरमा ५ विकेट गुमायो । नेपालको पहिलो विकेट सस्तैमा...
एएफसी च्याम्पिपयनसिपः नेपाल र उज्वेकिस्तान आज भिड्दै
साउन २ २०७४ रासस
काठमाडौं साउन,२ । एएफसी २३ वर्षमुनिको च्याम्पियनसिप छनोट चरणको पहिलो खेल आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग कमजोर खेल प्रदर्शन गरेको नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल उज्वेकिस्तानको सामना गर्नेछ । युएईको अल अइनस्थित ताहानोनविन मोहम्मद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार आज राति ८ः१० मिनेटमा शुरु हुने खेलमा नेपालले विजय लक्ष्यका साथ उज्वेकिस्तानको सामना गर...
आइसीसी एसिया यु–१९ विश्वकप छनोटः नेपालले सिंगापुरलाई ७३ रनमै रोक्यो
साउन २ २०७४ .
सिंगापुर,साउन, २ । आइसीसी एसिया यु–१९ विश्वकप छनोट क्रिकेटमा अहिले नेपाल र सिंगापुर खेलिरहेका छन् । खेलमा नेपालले विजयका लागि जम्मा ७४ रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ । यसअघि टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरेको नेपालले कप्तान सन्दीप लामिछानेको आकर्षक बलिङको मद्धतले सिंगापुरलाई २९ ओभरमै अलआउट गरी ७३ रनमा रोक्न सफल भएको हो । सन्दीपले २१ खर्चेर ५, सहाब आल...
एएफ्सी युथ २३ च्याम्पियनसिपमा नेपालको खराव प्रदर्शन, युएई ५–० ले विजयी
साउन, १ । अल आइन सिटी । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा सुरु भएको एएफ्सी युथ २३ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले खराव प्रदर्शन गरेको छ । उद्घाटन खेलमा नेपाल आयोजक युएईसंग ५–० ले पराजित भयो । ८ मिनेटदेखि गोलको खाता खोल्न थालेको युएईले मध्यान्तरसम्म ४ गोल गरिसकेको थियो । ६० औं मिनेटमा पाँचौं गोल गरेको युएई त्यसपछि भने रोकिएको थियो । हारपछि नेपाली टिम...
आम्दानी उस्तै, खर्च बढ्यो, बचत घट्यो :आहा–रारा फुटबल
असार ३१ २०७४ .
पोखरा ,असार ३१- खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नसक्दा मुलुककै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता आहा–रारा गोल्डकपको आयोजक सहारा क्लवको आम्दानी स्थिर भएपनि बचत घटेको छ । गत माघमा पोखरा रंगशालामा सम्पन्न प्रतियोगिताको १५ औं संस्करणबाट क्लवले अघिल्लो वर्षका तुलनामा ७ लाख ४१ हजार भन्दा कम बचत गरेको छ । प्रतियोगिताको १४ औं संस्करणमा ३५ लाख २ हजार बचत भएकोमा १...
सन्दीपको कप्तानीमा यू–१९ टोली
असार ३० २०७४ .
काठमाडाैं असार,३० । सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले आइसिसी यू–१९ विश्वकप क्वालिफायर एसियन छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । भारतमा स्थानीय टोलीविरुद्ध अभ्यास खेलमा प्रदर्शनका आधारमा बिहीबार १४ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा भएको हो । सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट समेत प्रतिस्पर्धा गरिसकेका दीपेन्द्रसिंह ऐरी र मोहमद असिफ शेखले पनि स्थान बनाएका छन् ...
असार २७ २०७४ .
काठमाडौं असार २७ । नेपाल र बङ्गलादेशको–२३ वर्षमुनिको राष्ट्रिय टोलीबीच अहिले मैत्रीपूर्ण फुटबल भइरहेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदानमा भइरहेको खेलमा नेपालले १–० को अग्रता लिएको छ । नेपाली टोलीका कप्तान विमल घर्तीमगरले २०औँ मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका हुन् । विमलले अग्रपंक्तिका अन्जन विष्टले दिएकाे पासमा गोल गरेका हुन् । २३ वर...
माछापुच्छ्रे क्रिकेट लिग साउन १६ देखि पोखरामा
काठमाडौँ असार २७– माछापुच्छ्रे क्रिकेट क्लब र खुकुरी इन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा पोखरामा साउन १६ देखि २८ गते सम्म माछापुच्छ्रे क्रिकेट लिग प्रतियोगिता हुने भएको छ । अक्सनद्वारा खेलाडीको चुनाव गरिने प्रतियोगिताको लिगमा बाग्लुङ, स्याङ्जा, पर्बत, तनहु, पोखरा र माछापुच्छ्रे गरी ६ टोली सहभागी हुनेछन् । स्थानीय खेलाडीहरुको सहभगिता र कप्तानी टोलीमा रहनेछ...
यु–१९ टीम नेपाल विजयी
एसिया क्षेत्रबाट आईसीसी यु–१९ विश्वकप छनोटको तयारीमा रहेको टीम नेपाल अभ्यास खेलमा विजयी भएको छ । भारतको दिल्लीमा २० असारमा नेपालले स्पोर्टस् एकेडेमीलाई १२१ रनको अन्तरले पराजित गरेको हो । वर्षाका कारण ४० ओभरमा झारिएको खेलमा नेपालले सात विकेटको क्षतिमा २५० रनको योगफल तयार पारेको थियो । जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको स्पोर्टस् एकेडेमी १२९ रनमा अलआ...
अब टेनिसको पनि विश्वकप
काठमाडौँ असार १६ – विश्वभरी चर्चित खेल टेनिसको विश्वकप अहिलेसम्म आयोजना नभएको कुरा सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्ला । तर खेल जगतमा तहल्का मच्चाउने यस खेलको विश्वकपको आयोजना आजसम्म पनि भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस महासघंले विश्वकपको यही दुःखदपूर्ण अभावलाई आगामी वर्षदेखि पूरा गर्ने भएको छ । महासघंले सन् २०१८ को नोभेम्बरमा स्वीटजरल्याण्डको जेन...
काठमाडौं असार,१३ ।सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबलको आयोजना कतार गर्न ठूलो भ्रष्टाचार भएको जर्मन मिडियाले दाबी गरेको छ । जर्मनीको बिल्ड समाचारपत्रको दाबी छ कि उसले फिफाका स्वतन्त्र न्यायिक जाँचकर्ता माइकल गार्सियाले २०१४ मा तयार पारेको प्रतिवेदन फेला पारेको छ । बिल्डले पाएको प्रतिवेदनमा फिफाका एक अधिकारीकी १० वर्षीया छोरीको खातामा २ मिलियन डलर ट्रा...
खेलमैदानका लागि रकम सहयोग
पाल्पा असार ९ - रामतुल्सी माध्यमिक विद्यालय रामपुरको खेलमैदान स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ रामपुरले रु दुई लाख ५६ हजार बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भोजेन्द्रप्रकाश ढकालले सो रकम विद्यालयका अध्यक्ष रामप्रसाद भट्टराई र प्रधानाध्यापक बालकृष्ण लम्साललाई हस्तान्तरण गरे । खे...
भारतीय क्रिकेटका कोच कप्तान विवादमा आयो सुनील गावस्करको प्रतिक्रिया
मुम्वई,असार ८, – भारतीय क्रिकेट कोच र कप्तानबीचको विवादमा चर्चित पूर्व ब्याट्सम्यान सुनील गावस्करले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छन् । अनिल कुम्बले र विराट कोहलीबीचको विवादमा, टिम इन्डियाका चर्चित ब्याट्सम्यान भनेका छन् कि, ‘यदि कप्तानलाई मन पर्ने र मन नपर्ने कुराले यति प्रभाव पार्छ भने, क्रिकेट सल्लाहकार समितिको के काम छ र ? खासमा, बीसीसीआईको क्रिके...
रोनाल्डोले ट्याक्स छलेको आरोप
म्याड्रिड ,रियल म्याड्रिडका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ट्याक्स छलेको खुलासा भएको छ । म्याड्रिडको अपराध अभियोजन संस्थाका अनुसार रोनाल्डोले सन् २०११ देखि ०१४ सम्म १४ करोड ७० लाख पाउन्ड कर तिरेनन् । संस्थाले पोर्चुगल फुटबल संघ र रियल म्याड्रिड क्लबलाई समेत रोनाल्डोद्वारा कर छलेको जानकारी दिएको छ । ‘रोनाल्डोले चार वर्ष स्पेनिस सरकारलाई सबै...